Zanu PF Yoyambirwa Kusamanikidza Vana veChikoro Kupinda Misangano Yayo
Zimbabwe's President Robert Mugabe and his wife Grace arrive to address the final rally of his ZANU-PF party in Harare, July 28, 2013.
Sangano rinozviti This Constitution My Constitution rinoti harisi kufara nezvinoitwa neZanu PF iyo iri kumanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri.
Sangano iri rinoti kumanikidza vana vechikoro kunoita kuti vanasikana kunyanya vatarisane nenjodzi yekubatwa chibharo. Rinotiwo gurukota redzidzo yepasi, VaLazarus Dokora, vanofanirwa kuisa mitemo yakajeka inorambidza maitiro akadayi
Mukuru wesangano iri, Muzvare Abigail Mupambi, vanoti sangano ravo raendesa magwaro enyunyuto kumahofisi ebazi redzidzo munzvimbo dzaksiyana-siyana munyika.
Muzvare Mupambi vanoti pane kuti bazi redzidzo rikoshese kuchinja zvidzidzo zvevana sezvarakaita munguva pfupi yapfuura, ringadai richikoshesa zvikuru nyaya yekuwona kuti kodzero dzevana vechikoro dzachengetedzwa.
Vati kumanikidzwa kuenda kumisangano iyi hakutyori kodzero dzavo chete, asi kuti kunosiya vanasikana vari panjodzi yekushungurudzwa kana kubatwa chibharo.
Murongi wemabasa musangano re This Constitution, My Constitution mudunhu reMatabeleland South, VaLangton Mpofu, vanotsinhirawo kuti bumbiro remitemo yenyika rinoburitsa pachena kodzero dzevana vachitiwo zvakakosha kuti bazi rezvedzidzo rive pamberi mukuchengetedza kodzero idzi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvedzidzo kana kubato reZanu PF pamusoro penyaya iyi.
Mutauriri webato reZAPU, VaIphithule Maphosa, vanoti bato ravo rinoshorawo zvikuru kumanikidzwa kwevana vechikoro kuenda kumisangano yezvematongerwo enyika vachiti bato reZanu PF rinoziikanwa nekushungurudza avo vasingaritsigiri vachiti vechidiki hapana zvavangadzidza pamaitiro akadai.
VaMaphosa vanoti pane mutemo unotaura pachena kuti kana vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yavo havafanirwe kumanikidza vanhu kuenda kumisangano iyi.
Mutauriri wevechidiki reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu, VaBrian Dube, vanoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, semunhu akambove mudzidzisi uye vachiziva kukosha kwakaita dzidzo, vanofanirwa kuona kuti bato ravo rasiya tsika yekumanikidza vana vechikoro kuenda kumisangano yavo.
Nguva dzose panoitwa misangano yeZanu PF munzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe vanhu vanogara vachinyunyuta pamusoro pekumanikidzwa kuenda kumisangano iyi.
Asi vebato reZanu PF vanogara vachiti vanhu vanouya kumisangano yavo nekuda kwavo pasina anomanikidzwa.